Bichar Khabar » चुनाैतिपूर्ण नेपालकाे विश्वकप छनाेट संगै सुपर सिक्स यात्रा
चुनाैतिपूर्ण नेपालकाे विश्वकप छनाेट संगै सुपर सिक्स यात्रा
2 Mar 2018 04:03:14 PM | No Comments
नेपाली क्रिकेट टिम यतिबेला विश्वकप छनोटको संघारमा रहेको छ । इतिहास रच्ने दाउमा रहेको नेपाली क्रिकेटलाई विश्वसामु पुनः परिचित हुने मौका आएको छ । नेपाली क्रिकेट महत्वपूर्ण घडिमा छ । आईसीसी विश्वकप छनोटमा सफलता पाए नेपालको आगामी यात्रा निकै सुनौलो छ । विश्वकप छनोटको सुपर सिक्समा पुगे मात्रै नेपालले थुपै्र अवसर प्राप्त गर्ने छ भने नेपाली क्रिकेटको इतिहास त्यसै बन्ने छ । अहिलेसम्म नेपाल विश्वकप छनोटदेखि सुपर सिक्ससम्मको यात्रा तय गर्न सकेको छैन ।
नेपाली क्रिकेटसामु अवसरको ढोका अघि आएको छ । अब त्यो ढोकालाई नेपालले खोल्न सक्छ या सक्दैन ? केही दिनपछि नै थाहा हुनेछ । यद्यपि नेपालले खेल्न लागेको यो प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै माथिल्लो स्तरको हो । किनभने यो प्रतियोगितामा ४ टेष्ट नेशन राष्ट्रसहित ४ एक दिवसीय र २ लिष्ट ए का टिम छन् भने आफ्नै समूहमा जिम्बावे र अफगानिस्तान जस्ता टेष्ट नेशन राष्ट्र छन् ।
विभिन्न संकटबाट गुज्रिएको नेपाली क्रिकेटले आयोजक जिम्बावे, अफगानिस्तान, स्कटल्याण्ड र हङकङ जस्ता राष्ट्रलाई पराजित गर्न सक्ला ?कप्तान पारस खड्का भनेका छन्, “हामी त्यो लेभलमा पुगि सकेका छौ की सजिलो भन्ने कुरा कहि छैन । सबै टिम बलिया छन् ।डिभिजन टु मा जस्तै राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो भने हामी अवस्य राम्रै गर्न सक्छौँ । सजिलो छैन । हरेक टिम राम्रो छ । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट छानिएका राष्ट्र र चार वटा टेष्ट प्लेयिङ राष्ट्र छन् ।”
सुपर सिक्समा नेपालको सम्भावना कति ?
नेपाल विश्वकप छनोटको सबै भन्दा कमजोर राष्ट्र गनिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले पनि अन्य राष्ट्रलाई जतिको महत्व नेपाललाई दिएको छैन । अन्य देशका मिडियाहरूले पनि त्यहि अनुसारको स्थान दिएका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने नेपाल कुनै पनि टिमलाई पराजित गर्न सक्ने टिम हो ।
नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा यु–१९ क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक विनोद दासका अनुसार “नेपाल कुनै पनि बेला, जुनै टिमलाई हराउने क्षमता राख्छ । सबै खेलाडीले आफ्नो क्षमताअनुसार खेले जित सम्भव छ ।”
नेपाली क्रिकेट टिम सुपर सिक्समा प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित जिम्बावे प्रस्थान गरेको हो । सुपर सिक्सम पुग्ने नेपालको सम्भावना पनि छ । समूह बी मा रहेको आफ्नो ग्रुपको टप थ्री मा परे नेपाल सुपर सिक्समा पुग्नेछ । तर त्यो त्यति सजिलो भने छैन ।
कप्तान पारसले सुपर सिक्स र एक दिवसीय मान्यता पाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कप्तान पारसले भने “हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको सुपर सिक्स पुग्ने हो । त्यसपछि हामी विश्वकपको सपना देख्न सक्छौँ । त्यति सजिलो हुने छैन । २ वटा राष्ट्र मात्रै विश्वकपमा छनोट हुने भएकाले कतिपय राष्ट्रले करिब २ वर्षदेखि नै अभ्यास थालेका छन् । अहिलेको लागि भनेको एक दिवसीय मान्यता पाउने र सुपर सिक्समा पुग्ने नै हो ।”
त्यसो त, नेपालले आफ्नो पहिलो खेल फागुन २० गते नै आयोजक जिम्बावेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । जिम्बावे नेपालको लागि बलियो र नौलो टिम हो । उमेर समूहमा जिम्बावेसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेपनि सिनियर टिमसँग खेलेको छैन ।
‘पहिलो गाँसमै ढुंगा भने झै’ पहिलो खेलमा हारिन्छ भन्ने एक प्रकारको नेपाली खेलाडीमा मानसिक दबाब हुन सक्छ । तर, नेपाली क्रिकेट टिम जिम्बावे जानुअघि कप्तान पारसले आफूहरू निकै उत्साहित रहेको बताएका छन् ।
“हामी निकै उत्साहित छौँ । किनभन्दा हामी सन् २००८ सालमा म आफै कप्तान हुदा यु–१९ मा जिम्बावेलाई हराएका थियौ । फेरी एउटा अवसर पाएका छौँ जिम्बावेका सिनियर टिमसँग खेल्ने । यदी हामी ग्राउण्डमा गएर राम्रो खेल्ने हो भने जिम्बावेलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छौ ।” कप्तान पारसले भने ।
नेपालले विश्वकप छनोटमा सहभागिता जनाएको यो तेस्रो पटक हुन्छ । यद्यपी सन् २००१ मा नेपालले भाग लिएको बेला आईसीसी ट्रफीको नाम थियो । त्यसबेला पनि नेपालले विश्वकप खेल्ने मौका खेर फालेका थिए । त्यसबेला नेपाल नामिवियासँग पराजित भएपछि विश्वकप खेल्ने अगाडीको ढोका बन्द भएको थियो ।